ESS2018 - West Midlands Moto Service Extrication Challenge - Emergency Live
ESS2018 - West Midlands Moto Service Extrication Challenge
The Extrication Challenge, yakagadzirirwa West Midlands Moto Service (WMFS) uye kutongwa UKRO, anodzokera The Emergency Services Show mushure mokutaura kwayo kubudirira gore rakapera.
Mukukwikwidza kunoitika hupenyu pamusangano wekuratidzira unoita kuti vashanyi vauye pedyo nekuita. Ichava chiitiko chakanyatsopindirana uye chisingatauriki chevatori vechikamu uye kuratidza vaenzi zvakafanana. Zvose zvakarongwa zve 16 zvakasiyana-siyana mararamiro emagetsi maitiro emakera achadzorera chiito kuburikidza nechikwangwani che 16-foot-wide. Vataridzi vachaona kusanganiswa kwezvikwata zvinosanganisira pamusoro pe drone footage inopiwa neWest Midlands Police, uye makamera akapfeka muviri pahofisi inotarisira, Casualty Carer neTechnology Team muboka rimwe nerimwe.
Muchikamu chimwe nechimwe mapoka maviri anokwikwidzana kubva kune achaita zvinoputika kubva pane zviitiko zvakakanganisika. Akachengetera vhiki isati yambokwikwidzana kwekwenyika yose muCardiff, chiitiko chacho chichava chakanaka-chechi chakanaka kune mamwe mauto akasiyana anotarisirwa, anosanganisira mana kubva kuWest Midlands uye makumi masere kubva kune dzimwe UK moto nemasununguro. Ive maWMFS mapoka achabatanidza mapoka maviri ezvesimiti uye vashandi vatsva uye vashandi.
Nzira dzakanakisisa dzakachengetedzwa dzakachengetedza dzichave dziri munzvimbo yekuona semhizha dzinosanganisira chiitiko chekugadzirisa nekudzivirira, kuchengetedzwa uye kuongororwa kwemaitiro, kukwidziridzwa, unyanzvi hwekugadzirira pre-kuchipatara uye kushandisa nyanzvi yekudzivirira midziyo inoshandiswa.
Dambudziko rinoitika munharaunda yakatsaurirwa nemadzika maviri kuitira kuti mapoka maviri evashanu anogona kukwikwidzana pamwe chete. Mapoka achave nemaminitsi e30 kubva 'kusvika' kwavo pazviitiko izvi zvakafanirwa kupedzisa zviitiko zvakawanda sezvazviri nyore.
Rumwe rutivi ruchazara nemotokari ine dambudziko rakaoma uye rakaoma uye vaviri vanouraya (vachitamba nekutambura kwechimiro cheboka). Mumwe ane kukuvara kwakakomba kunoda kubvisa chikamu chemotokari yekudzikinura yakachengeteka, yechipiri hachina kukuvadzwa zvakanyanya, asi ichiri kunoda kushungurudzika.
Kune vashanyi, ruzivo rwakanyatsotarisirwa runotarisirwa kuisa kwete kwete chete dambudziko rekudzivirira asiwo yevhidhiyo yemamiriro ezvinhu epakambani akambotanga, akonzerwa nemutyairi akavhiringidzika uye kushungurudzwa kweboka shure.
IWMFS Extrication Challenge inobata mumazuva ose eEmergency Services Show yakaitirwa muHoro 5 paN NEC, 19-20 September 2018.
Chigaro cheAmbulance, chiedza chisinganyatsogadziriswi uye chiri nyore kubata mhinduro kubva kuSpencer
Mwedzi 12 mujeri nekuda kwekurova munhu anoshanda mune imwe nguva